Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Nde ndị Europe 13.3 bịarutere ịkwalite mgbake njem njem Gulf
Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ Bahrain na -agbasa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • Akụkọ okomoko • News • Akụkọ Oman • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Iwughachi • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa UAE
Nde ndị Europe 13.3 bịarutere ịkwalite mgbake njem njem Gulf.
Mba dị na GCC gụnyere United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait na Bahrain na ha niile na -enye ezigbo nhọrọ ụgbọ elu yana ngwaahịa njem dị iche iche, nke na -amasị ndị njem Europe.
Ndị njem Europe ga-abụ onye isi ọkwọ ụgbọ ala mgbake mpaghara GCC site na COVID-19.
Na 2019 mbata ọrịa na-esite na Europe gaa mba GCC ruru nde ndị njem 11.8.
A na-ebu amụma na ndị bịarutere ọrịa ọjọọ ga-agbake na nde ndị njem nde 13.3 ka ọ na-erule 2024, ọnụego uto kwa afọ (CAGR) nke 17.5%.
Ndị njem Europe ga -abụrịrị isi ahịa maka mpaghara Gulf, ọkachasị Kọmitii Njikọ Ọchịchị Gulf (GCC) mba, nke ga -enyere aka mgbake ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ha. Mba dị na GCC gụnyere United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait na Bahrain na ha niile na -enye ezigbo nhọrọ ụgbọ elu yana ngwaahịa njem dị iche iche, nke na -amasị ndị njem Europe.
Ihe omuma ohuru nke ulo oru na-ekpughe na na mbata oria ojoo nke 2019 si Europe gaa mba GCC ruru nde ndị njem 11.8. Na 2020, ndị bịarutere dara na nde 3.9 n'ihi ọrịa na-efe efe, mbelata afọ 67% (YOY), agbanyeghị, a na-ebu amụma na ndị bịarutere ọrịa ga-agbake na nde ndị njem 13.3 site na 2024, ọnụego uto kwa afọ (CAGR). bụ 17.5%.
N'iburu oke mmụba a tụrụ anya ya n'aka ndị njem Europe na -abata GCC mba n'ime afọ atọ na-abịanụ, ha ga-abụ ndị ọkwọ ụgbọ ala nke mgbake njem mpaghara site na COVID-19. Otu obodo dị mkpa na mpaghara ahụ bụ UK dị ka amụma ụlọ ọrụ na -egosi na ndị bịarutere UK na mba GCC ga -eru nde 3 site na 2024 CAGR nke 21.7%.
UK ndị njem na -amasịkarị ya GCC mba dị ka ha na -enye atụmatụ njem dị iche iche maka anwụ anwụ na udu mmiri, yana oke osimiri ndị mara mma, obodo na -agbasasị na ihe omume njem. Ọganihu na ọnọdụ nke Dubai nwere ụlọ oriri na ọ luxuryụ andụ na ahụmịhe mara mma nke ọ ga -enye na -amasịkwa ndị njem UK.
Mba gafee GCC nwere ọtụtụ ihe ịrafu ndị Europe, yana ngwakọta agwakọta site na ezumike osimiri ọdịnala na ahụmịhe ọdịnala nke ọdịnala mpaghara na akụkọ ihe mere eme nyere. Nke a ga -enyere ya aka ịmaliteghachi ewu ewu ngwa ngwa karịa ebe ndị ahụ na -enye ahụmịhe ezumike obodo.